Ny ahiahy tsy ihavanana… | NewsMada
Ny ahiahy tsy ihavanana…
Par Taratra sur 15/03/2017
Miroso ihany sa nangina tanteraka ny fanadihadiana mikasika ny “Raharaha Antsakabary Befandriana Avaratra” ? Asa aloha, fa tsy mbola nahazoam-baovao mikasika izany, hatreto ny eo anivon’ny fitondram-panjakana. Teo rahateo ny zava-doza nahazo ny firenena, noho ny fandalovan’ny rivodoza Enawo, ka ndeha atao hoe revo amin’ny fiatrehana ny fanarenana ireo faritra niharam-pahavoazana sy ny fanampiana ireo traboina noho izany angaha ny fanjakana. Raha tena izay tokoa.
Raha ny marina anefa, tsy tokony hisakana ny fitohizan’ny fanadihadiana sy famotorana atao izany. Efa samy nilokaloka sy niloa-bava rahateo ny mpitondra fa tsy maintsy hatao izany, ahalalana ny marina, ary tsy tokony hisy ho afa-bela amin’izany izay tompon’andraikitra fa tsy maintsy handalo fitsarana. Taorian’ny fampakarana ny raharaha teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana ireo voarohirohy ho namono ireo polisy roa lahy niharan’ny fitsaram-bahoaka, andrasan’ny maro fatratra hatramin’izao kosa ny momba ireo polisy hoe nandoro trano fonenana sy nanao herisetra tao Antsakabary.
Manahy ny maro fa sao hosarontsaronana sy hahodinkodina mangingina any ny tohin’ny raharaha. Asa na izany no nahatonga ny fiarahamonim-pirenena sasany, hampitandrina sahady ny amin’ny tsy fanekena ny tsimatimanota amin’ity raharaha ity. Toa lasa lavitra mihitsy aza izy ireo amin’ny hoe sao tokony hiantsoana fanadihadiana iraisam-pirenena izy ity. Firifiry mantsy izay raharaha lehibe teto amin’ny firenena very anjavony izay. Ny ahiahy tsy ihavanana, hoy ny fitenenana.